नरेन्द्रसिंह कार्की नयाँ पत्रिका
काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारमा हुँदा एमसिसी पारित गराउन प्रयास गरे पनि सभामुखलगायत केही व्यक्तिका कारण सम्भव नभएको बताएका छन् ।
आफ्नै निवास बालकोटमा एमसिसी टोलीसँग बिहीबार भएको भेटवार्तामा ओलीले सरकारमा हुँदा संसदमा पेस गरिसकेको तर सभामुखलगायत केही व्यक्तिको भूमिकाका कारण अघि बढ्न नसकेको बताएको भेटमा सहभागी एमाले नेता राजन भट्टराईले जानकारी दिए ।
ओलीले अहिले सरकारमा एमाले नभएको र भूमिका बदलिएको समेत बताएका थिए । भेटपछि भट्टराईले पत्रकारहरूसँग भने, ‘अहिले हामी अपोजिसनमा छौँ । हाम्रो भूमिका बदलिएको छ । हिजो हामी सरकारमा हुँदा जे गरेका थियौँ, आज हामी अपोजिसनमा हुँदा त्यो गर्न मिल्दैन ।
तपाईंहरूलाई पनि थाहा छ, डेमोक्रेसीमा अपोजिसनको रोल के हो ? रुलिङ पार्टीको रोल के हुन्छ ? हामीसँग रुलिङ पार्टीले यो विषयमा अहिलेसम्म छलफल गरेको छैन । रुलिङ पार्टीको तर्फबाट कुनै डिसिजन पनि नआएको र हामीलाई कुनै प्रस्ताव पनि नगरेको अवस्था हो । यहाँहरूले यही अवस्थामा बुझिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो ।’
ओलीले एमसिसी टोलीको भ्रमणको सफलताको शुभकामनासमेत दिएका छन् ।